कुलमान प्रति आममानिसको आशक्त,सामाजिक सञ्जालमा अहिले छरपष्ट देख्न सकिन्छ । – Kandara News
Tue, 17 May, 2022 | २०७९ जेठ ३ गते
कुलमान प्रति आममानिसको आशक्त,सामाजिक सञ्जालमा अहिले छरपष्ट देख्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : २०७७ भदौ ११ गते १:२९
एकाएक दोस्रो कार्यकालमा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रसंगलाई लिएर आम जनता कुलमान घिसिङप्रति कति आशक्त छन् भन्ने उदाहरण भाइरल भएको बधाईबाट पुष्टि हुन्छ । मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई बधाईको ओइरो आयो मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको भन्दै उत्साहका साथ बधाइ दिन थाले मानिस । यद्यपि, यस विषयमा उर्जामन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्तो कुनै प्रस्ताव लगिएको थिएन । खैर जेहोस तर उनी आम मानिसको मन मष्तिस्कमा बसिसकेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो बधाइ दिन गरिएको हतारो ।
कलाकार सिताराम कट्टेल(धुर्मुस)ले पनि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै बधाइ दिन भ्याए । यता डा.राम उप्रेतीले पनि राम्रो काम गर्दा जनताले माया गर्छन् भन्दै घिसिङलाई बधाई दिए । सामाजिक सञ्जालमै प्रकाश बस्नेतले पनि कुलमानलाई अल्छी भन्दै ४ बर्षमा एक दिन पनि बत्ति काट्न जागर नगरेको भनेर लेखे ।
फेरि पनि यस्तै अल्छी गर्नु भन्दै उनले बधाई दिए । यी त सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । कतिपयले गलत समाचार नै भएपनि सबैले बधाइ दिएपछि सरकारलाई एक प्रकारको दबाब महसुस हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । केही व्यक्तिले त फोटोको फ्रेम नै बनाएर कुलमानको फोटो सहित तिमी छौ र त देश उज्यालो छ भन्दै प्रोफाइल बनाइरहेका छन् । कुलमान प्रतिको आममानिसको आशक्त सामाजिक सञ्जालमा अहिले छरपष्ट देख्न सकिन्छ ।
ताजा अपडेट सबै
निस्दीमा नेकपा एमालेको क्लिन स्विप
तिनाउ मा अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा काँग्रेसको उम्मेदवार विजयी
पूर्वखोलामा एमालेको प्यनल नै विजयी पूरा विवरण सहित
निस्दीको बाकामलाङ्गमा एमालेको प्यालनै विजयी
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा न ४ देवीनगरमा नेकपा एमालेको प्यानलनै विजय ।
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा न ३ मा रिङ्नेरहमा नेकपा एमालेको प्यानलनै विजय ।
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा न २ मा जल्पामा नेकपा एमालेको प्यानलनै विजय ।
ताहुमा वडा अध्यक्ष सहित सबै नेकपा एमालेका सदस्यहरु बिजयी
पूर्वखोला मिडिया प्रा लि. द्वारा संचालित कम्पनी दर्ता नम्बर : २३३८९३/०७६/०७७
अनलाईन दर्ता प्रमाण पत्र नम्बर : २२१४/०७७-०७८
संचालक प्रबिण तिमल्सिना , बिकाश गैरे, डिल्ली राज पंगेनी
कार्यकारी प्रमुख - डिल्ली राज पंगेनी
सम्पादक - हरि बहादुर बारघरे
पूर्वखोला	- ३, पाल्पा
Copyright © 2020 Purbakhola Media Pvt. ltd., All Rights Reserved.